Uveza okuwinise iMaritzburg uThlolane - Impempe
Uveza okuwinise iMaritzburg uThlolane
UTebogo Thlolane weMaritzburg United
Iwasebnzele kanzima futhi yawathola sekuminyiwe amaphuzu amathathu iMaritzburg United ehlule iBlack Leopards ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership eHarry Gwala Stadium ngoLwesibili kusihlwa.
Igoli lokuwina lingene ngomzuzu wokugcina wesikhathi esengezwe ngunompempe, kanti cishe neLidoda Duvha ibisizitshelile ukuthi okungenani izobuyela ekhaya nephuzu.
Kudlaliswe kabi uRyn Rae engaphakathi ebhokisi leLeopards, kwaba yiphenathi, wayibeka enethini uThabiso Kutumela.
Ekhuluma ngemuva komdlalo, uTebogo Thlolane uthe kwehle umthwalo emahlombe wabo njengoba bebesindeka kulandela ukungawini emidlalweni emihlanu edlule.
“Angazi nokuthi ngithini… ngiphelelwa amagama. Ngicabanga ukuthi kusikhululile. Besibhekene nesikhathi esinzima kakhulu kanti nokuzethemba bese kwehlile,” kusho uThlolane obizwa ngelikaMessi ebholeni.
Njengoba ibingasaziwa iwini kwiBlue Hearts, leli qembu bese limoyizelelana nezembe njengoba lingasemsileni. Sekunethemba lokuthi le wini izovula izinhlanhla.
“Siye kulo mdlalo sazi ukuthi kufanele futhi kubalulekile ukuthi siwole amaphuzu agcwele. Sisebenzile futhi sibe namathuba amaningi okushaya amagoli, kodwa ke kwesinye isikhathi akubalulekile ukuthi udlala kanjani ikakhulukazi emidlalweni efana nalona.
“Silwe kakhulu njengoba ubonile umdlalo uphele abanye sebebanjwa amajaqamba, abanye sebexhuga… Kodwa sijabule ngokuthola amaphuzu amathathu futhi sinethemba lokuthi sizokwakhela phezu kwawo ukusuka manje” kuphetha uThlolane.
Umqeqeshi weMaritzburg, u-Ernst Middendorp yena uncome inhlanhla engandele bani ababenayo ukuthi bathole igoli sekubalwa amanenjana umdlalo uphele.
“Kuhlezi kuba yinhlanhla uma uthola igoli ngemizuzu yokugcina. Ngicabanga ukuthi bekusifanele ukuthola amaphuzu amathathu. Sifuna ukuqinisa kakhulu ukusuka lana,” kusho uMiddendorp.
Previous Previous post: Sezikhala enyameni izinqumo zonompempe kuTembo weSuperSport
Next Next post: Akakwazi ukuzibamba ngendlela ajabule ngayo uBenni ngabadlali boSuthu